रा.प्र.पा अध्यक्ष को आरोप – प्रचन्ड र देउवा ले गर्दा आज युवा समुदाय पलाएन हुन वाध्य (भिडियो) « Niatra TV
रा.प्र.पा अध्यक्ष को आरोप – प्रचन्ड र देउवा ले गर्दा आज युवा समुदाय पलाएन हुन वाध्य (भिडियो)
काठमाण्डौ,माघ १३ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले पुरानै प्रब्रिती भएका निनै नेताहरुलाई चुनावमा जिताए फेरी युवापुस्ता पलाएन हुने ठुकुवा गर्नु भएको छ । बुधबार केन्द्रिय पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको पार्टी प्रबेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वहाँले उक्त कुरा भन्नु भएको हो ।
वहाँले आफ्नो पार्टिमा लागेर पछुतो नहुने र अब देश बचाउँन यस्तै युवाहरु पनि राजनितिमा लाग्नु पर्ने भन्नु भयो । “देश आज भ्रस्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ यती मात्र होइन देशका बिभिन्न भाग बिदेशीले मिचीरहँदा सम्म पनि सरकार मौन रहनु नालायकीपनको उदाहरण हो” भन्नु भएको छ ।
एक प्रसँगमा वहाँले भन्नु भयो अब यो देशमा प्रचन्ड देउवा र ओली को के जान्छ ? देश रित्तियोस या बेचियोस ? आरोप लगाउनु भयो । त्यसैले राप्रपामा जोडीने युवाहरुलाई पस्चाताप हुने मौका दिने छैनौ । भन्नु भयो । हेर्नुहोस् भिडियो –